Gaadiid U rarnaa Ganacsato oo si Nabad ah ku gaarey Magaalada Xudur | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Gaadiid U rarnaa Ganacsato oo si Nabad ah ku gaarey Magaalada Xudur
Gaadiid U rarnaa Ganacsato oo si Nabad ah ku gaarey Magaalada Xudur
In ka badan 20 baabuurta waa weyn una rarnaa ganacsato reer Bakool ah ayaa maanta si nabad ah kusoo gaaray magaalada Xudur, xarunta gobolka Bakool.
Gaadiidkaan oo in mudo ah ku xayirnaa degmada Ceelberde ee isla gobolka Bakool ayaa waxaa soo galbiyay ciidamo ka kala tirsan dowlada federaalka Soomaaliya iyo Koonfur galbeed.
Ciidamada soo galbiyay gaadiidkaan badeecooyinka usoo siday magaalada Xudur una rarnaa ganacsatada magaalada ayaa waxaa hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Bakool mudane Shiine Macallin Nuurow iyo taliyaha qaybta 60aad ee CXDS jeneraal Maxamed Sheekh Cabdullaahi (Ciiro) waxaana qayb ka ahaa xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Koonfur galbeed oo uu ka mid ahaa xildhibaan Cusmaan Buulle Macallin iyo masuuliyiin kale.
Kolonyada gaadiidka ah ee soo galbisay gaadiidka ganacsatada u rarnaa ayaa waxaa magaalada banaankeeda kaga hortagay oo si weyn usoo dhoweeyay dadweynaha magaalada Xudur oo aad ugu faraxsanaa inay si nabad ah gaadiidka ganacsatada kusoo gaaraan magaalada.
Sidoo kale waxaa la filayaa inay dhowaan soo gaaraan magaalada Xudur tiro kale oo gaadiid ganacsato u raran ayada oo ay dagaalyahano Alshabaab ka tirsan mudaba go’doominayeen degmooyin ka tirsan gobolka Bakool sida Xudur iyo Waajid ayaga oo tiro dhowr jeer ah gubay gaadiid u rarnaa ganacsato Soomaaliyeed.